Kashmir: Fetra Iafaran’ny ‘India Nomerika’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2016 9:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, русский, English
Tafika Indiana eo ampanatontosana ny asany ao Jammu sy Kashmir. Sarin'i Kris Liao avy ao amin'ny Flickr . CC BY-NC-ND 2.0
Nosoratan'i Hasit Shah ity lahatsoratra ity ary nivoaka voalohany tao amin'ny Slate's Future Tense blog.
Ary navoaka indray eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tsy misy ny aterineto amin'ny finday ao Kashmir tantanan'i India efa ho roa volana izay. Lasa zava-misy mahazatra ho an'ny Kashmiris an-tapitrisany ny zavatra mety ho voina be ho an'ny ankamaroan'ny Amerikanina .
Nanakatona ny fidiran'ny finday amin'ny aterineto ny governemanta Indiana ho setrin'ny hetsi-panoherana feno herisetra izay nahatonga ny fahafatesan'ny mpitari-tolona iray tao an-toerana tamin'ny fifampitifirana tamin'ny miaramila indiana tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay. Olona am-polony no namoy ny ainy. Nahatonga ny fampielezana vaovao sy ny fikarakarana hetsi-panoherana ho sarotra kokoa ho an'ny olona ny tsy fisian'ny tambajotra sosialy an-tserasera an-tery, miaraka amin'ny tsy fahazoana mivoaka amin'ny alina efa mahazatra. Nantsoin'ny Gazety ao Kashmir ho “e-curfew” na “tsy fahazoana aterineto amin'ny alina” izany.
Araka ny fomba fijerin'ny governemanta, natao izany ho fisorohana an'ilay antsoina matetika hoe “hetsika anti-nasionaly”. Tsy dia mazava loatra ny dikany matetika. Tsy ao Kashmir ihany no toerana ampiasain'ny governemanta Indiana an'izany tetika izany. Tamin'ny herintaona raha tao Gujarat aho, ilay fanjakana miroborobo niavian'ny Praiminisitra Narendra Modi, nakatona nandritra ny herinandro ny aterineto tamin'ny finday rehefa nisy hetsi-panoherana arakasa, narahana herisetra ihany koa tao,
Mifanohitra tanteraka amin'ny heverina ho politika fampandrosoana ny teknolojia ao India ireo famerana mahazatra iniana atao amin'ny tsy fahafahana miditra amin'ny aterineto ireo. Ny “Digital India” no ezaky ny governemanta misokatra indrindra amin'ny any ivelany. Nitety izao tontolo izao i Modi, nasionalista mpahay teknolojia avy ao amin'ny Antoko elatra havanana Bharata Janatiya mba hivarotra ny hevitr’ India ho toy ny hery ara-toe-karena nomerika vao misondrotra, hanao fifanarahana amin'ireo mitovy amin'ny Google sy (tsy tena nahomby tamin'ny) Facebook. Namerina imbetsaka ny fomba fijerin'ny Firenena Mikambana izy izay milaza fa zon'olombelona fototra ny fidirana amin'ny aterineto miaraka amin'ny zavatra ilaina hafa toy ny herinaratra sy ny fitaovam-panadiovana.
Manana hambom-po ny governemanta, drafitra sarotra mba hampifandraisana ny firenena izay tsy misy afa-tsy
ny ampahadimin'ny mponina no manana fahafahana hiditra amin'ny aterineto talohan'ny nahatongavan'ny antoko BJP teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2014. Ankoatra ny fampitomboana ny isa sy ny kalitaon'ny fifandraisana aterineto dia kendreny ny fanatsarana ny sampan-draharahan'ny governemanta sy ny fandrisihana ny fandraharahana sy ny fanavaozana ara-nomerika ao an-toerana. Nasongadina tao amin'ny dokambarotra Reliance Jio, tolotra aterineto haingana sy mora vidy amin'ny finday avy amin'ny vondron'orinasa lehibe indrindra ao India, mihitsy aza i Modi.
Hetsi-panoherana tao Kashmir. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Kashmiridibber, CC BY-NC-ND
Niaka-nidina ny herisetra nisy teo amin'ny mpitandro ny filaminana Indiana sy ireo zatovolahy ao Kashmir faritra tantanan'India tao anatin'ny fitopolo taona. Faritra tsara tarehy, be tendrombohitra, manandanja ara-stratejika, ary faritra ifandroritana hatramin'izay ary maro ny olona ao aminy no tsy nahatsapa tena fa Indiana hatramin'izay. Misy ireo Kashmiris sasany mieritreritra ny hiaraka amin'i Pakistan, firenena efa mifehy ny ampahany lehibe an'i Kashmir ao amin'ny “tsipika fanaraha-maso” nifandirana sy niteraka ady nahatonga fery (notakian'i Shina ny faritra zorony kely atsinanana). Ny hafa kosa misafidy ny fahaleovantena. Tsy misy amin'izany safidy izany no azon'ny governemanta Indiana na ny ankamaroan'ny Indiana ekena, ary misy hatrany ny fivezivezen'ny miaramila maro ao amin'ny faritra. Sarotra ny politika, ary tsy raiki-tapisaka ny herisetra .
Tamin'ny taona 2008, namoaka tatitra avy ao Srinagar izay renivohitry ny vanim-potoana mafanan'i Jammu sy Kashmir (mahafaoka faritra roa mitambatra ny fanjakana Indiana – Haindò no betsaka ao Jammu, ary Silamo ny ao Kashmir) ho an'ny BBC aho nandritra ny fotoana iray nampirongatra ny herisetra . Nosomparan'ny famoriam-bahoaka ara-politika lehibe, ny firongatry ny asan'ny tafika, ny tora-baton'ny tanora, ary ny fahafatesana tsy azo idifiana ao an-tanàna ny fitonian'ny Farihy Dal mahafinaritra, izay manana ny lazany ny trano-sambo ho an'ny mpanao volantantely amin'ny fotoana milamina. Tsy ilaina hidiana akory ny aterineto na misy aza ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, satria tena vitsy ny olona manana fahafahana hanao izany amin'izany andro izany.
Latsaky ny 20 $ izao dia efa mahazo finday afa-miditra aterineto ao India, ary miroborobo be ny varotra .Lasa mora ny angotahiry ary mihatsara ny fifandraisana. Misy an-tapitrisany ny mpisera aterineto vaovao isam-bolana ary saika amin'ny finday avokoa izy rehetra. Mampiasa WhatsApp ny olon-drehetra hifandraisana ary tsara lavitra noho ny tolotra famelan-kafatra izany; Tambajotra sosialy azo antoka sy mandeha tsara izy na dia amin'ny fitaovana ambany kalitao aza no ampiasaina azy. Tsy mandeha ny Facebook matetika. Mahomby lavitra kokoa ny WhatsApp noho ny fandefasan-kafatra taloha hanaovana fifanakalozam-baovao sy fikarakarana ny hetsiky ny fikambanana, “anti-nasionaly”, na mifanohitra amin'izany.
Tsy banga tanteraka akory ny aterineto ao Kashmir amin'izao fotoana izao, fa mety ho tonga amin'izany ihany anefa. Mitana ny fahafahana miditra amin'ny aterineto sy ny fifandraisana amin'ny finday ny orinasa fifandraisan-davi-panjakana BSNL kanefa vitsy ny mampiasa ny tolotra. Naverina tamin'ny laoniny ny aterineto haingam-pandeha ankehitriny kanefa ny ankamaroan'ny olona tsy mbola manana izany karazana fifandraisana izany any an-tokatranony—matetika ny trano fandraisambahiny lafo vidy sy ny toerana ara-barotra hafa no manana Wi-Fi, ary mahita fomba hanovozana ny loharano tahaka izany ny olona sasany, matetika miangonangona amin'ny fampiasaina ny smartfindainy sy ny tenimiafina Wi-Fi nangalarina amin'ny sakeli-dalana manakaiky ireo trano be ireo.
Fa ho an'ny ankamaroan'ny olona, tsy misy ny aterineto. Tsy afa-mifandray mora foana ny fianakaviana. Nakatona ny sekoly noho ny herisetra, ary tsy afaka manovo loharano avy amin'ny tranonkala ny mpianatra hanohizana fianarana. Tsy misy na ny fanavaozana na ny fandraharahana nomerika. Sarotra ho an'ny mpanao gazety ny mitatitra izay mitranga. Tsy ampy ny vaovao miankina aman'aina. Nentina niverina any amin'ny vanim-potoana talohan'ny tontolo nomerika ny Kashmiris ao India. Manahy izy ireo ary natoka-monina.
Nanameloka ny fanapahana akitsirano ny tolotra aterineto tamin'ny volana Jona ny Vaomieran'ny Zon’ Olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana, herinandro vitsivitsy monja talohan'ny nipoahan'ny herisetra . Raha tsara indrindra dia fitaovana bontolo amin'ny fifehezan'andian'olona ny fanakatonana aterineto. Tsy mazava raha misoroka herisetra izany na hanatsara ny fiarovam-bahoaka. Misy hatrany ny fomba ifandraisana sy hanomanan'ny olona efa tapa-kevitra fihetsiketseham-panoherana ao Kashmir, sy any amin'ny toeran-kafa taloha elan'ny fampiasa fandefasan-kafatra .
Nanazava tsara i Modi fa zava-dehibe toy ny rano madio, na trano fialofana amin'ny alina ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, noho izany ny fanesorana ny foto-drafitrasa toy izany -na dia amin'ny fifehezana ny toe-javatra mampidi-doza aza- dia mifanohitra amin'ny tanjona manokana napetraky ny governemanta ho amin'ny fampandrosoana sy ilay sata mampieboebo ho demokrasia goavana indrindra manerana izao tontolo izao. Maharitra ela izany roa volana tsy misy aterineto izany. Ho an'ireo Kashmiris, tsapa bebe kokoa ho fanasaziana tambabe ny tsy fisian'ny aterineto fa tsy fepetram-piarovana.
Mpanao gazety monina any any amin'ny Ivontoerana Azia Atsimo, izay toerana nanaovany fikarohana momba ny fipongaran'ny media nomerika ao India, ao amin'ny Oniversiten'ny Harvard i Hasit Shah.
Fitantanam-pitondrana 1 andro izay